Soo dejisan Bandicam 3.2.5.1125 – Vessoft
Soo dejisan Bandicam
Bandicam – software ah in ay qabtaan shaashadda computer. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay qoraan a video tayo sare leh la ogaaday, , kulan video, meelo ka mid ah shaashadda, xidhiidhiyaa video chat iwm In Bandicam waxaa suurogal ah in ay gacanta oo soo bandhigi FPS, saldhigyo hotkeys iyo rogto ee logos. Software waxay kaalmeysaa badan oo qaabab warbaahinta caanka ah iyo codecs kala duwan. Bandicam u saamaxaaya in ay si toos ah u qoraan video of size u badan ama muddo gaar ah oo si toos ah la xidho aad computer dhamaadka nidaamka.
Qabashada Screen of computer
Taageerada qaabab warbaahinta caansan
Control iyo bandhigay FPS
Kartida in ay si toos ah u qoraan
Set badan oo qalab
Comments on Bandicam:
Bandicam Software la xiriira:
English, Français, Español, Deutsch... Far Manager 3.0.4774 iyo 3.0.4830 beta
العربية, English, Français, Español... MODO 10.1v2